Ny fampiharana IKEA Place dia nohavaozina miaraka amin'ny zava-baovao | Vaovao momba ny gadget
IKEA Place dia rindranasa noforonina tamin'ny taona 2017, ahafahan'ny olona mametraka modely feno vokatra IKEA ao an-tranony. Fampiharana iray izay nalaza be ary manavao ny orinasa ankehitriny. Manampy fiasa vaovao ny fanavaozana izay mampifangaro ny faharanitan-tsaina artifisialy sy ny zava-misy marina. Ho fanampin'izany, azo atao ihany koa ny mahazo toro-hevitra amin'ny famolavolana trano mifototra amin'ny fitambaran'ny angona, ny toe-javatra ary ny fitondran-tena.
IKEA Place noho izany dia manolotra fanovana lehibe amin'ny fampiharana, izay mampitombo ny fahafaha-mampiasa amin'ny karazana mpampiasa rehetra. Ny fanaingoana ny tranonao dia azo atao, toy ny teo aloha, fa miaraka amina fiasa vaovao izay manome hevitra bebe kokoa sy mampitombo ny fahafaha-manaon'ity fampiharana ity.
IKEA Place dia manolotra hevitra momba ny famolavolana anatiny handrisihana ny mpampiasa, na manampy azy ireo hamaha ny fisalasalany amin'ny fanaka ao aminy, ankoatry ny hafa. Ny fampiharana dia ahafahanao mamaritra ireo faritra tianao homena, ary hanome anao tolo-kevitra manokana miankina amin'ny safidinao sy ny fahalalan'ny orinasa ny fanaka. Amin'ny fikasihana vitsivitsy fotsiny dia azonao atao manolora efitrano iray manontolo. Azonao atao ihany koa ny mampiasa ny fakantsary amin'ny fitaovanao hifantoka amin'ny fanaka rehetra na aiza na aiza ary hahita avy hatrany ny vokatra IKEA izay mifanandrify indrindra aminy.
Amin'izany fomba izany dia mitady hanome aingam-panahy ny olona miaraka amin'ny haitao sy ny fahalalana ny orinasa. ny fomba iainan'ny olona ny fiainany. Fomba tsotra hananana fidirana amin'ny aingam-panahy amin'ny fotoana rehetra, ary amin'izay dia afaka manamboatra ny tranonao amin'ny fomba mety indrindra amin'ity kinova vaovao ity.
Noho ireo fiasa ireo, IKEA Place dia hanohy hanolotra fomba vaovao hiainana ny traikefa IKEA. Ampahany amin'ity tantara ity ihany ny teknolojia, araka ny filazan'izy ireo avy amin'ny orinasa. Satria misaotra azy dia afaka manao izy ireo Azo idirana kokoa ny fahalalana fanaka IKEA. Ary koa manampy mba hanamorana ny fampiasana azy.
Ny fanavaozana ny IKEA Place efa natomboka ho an'ny fitaovana iOS, iPhone sy iPad. Raha ny telefaona finday Android dia mila miandry kely kokoa ianao, efa mandeha ny fanavaozana. Saingy tsy manana daty isika amin'izao fotoana izao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » fampiharana » Ny taranaka vaovao an'ny fampiharana IKEA Place dia efa misy izao
Sonos Move, mandeha any ivelany ny mpandahateny Sonos vaovao